Oko kwenza indlela: iisampulu ezininzi ukususela Isitshayina abanikezeli
Njani buyers khetha Isitshayina umthengisi. Uninzi rhoqo, baye thelekisa linge kwaye iisampulu ezininzi. Ezinye considerations, ezifana reactivity okanye ezikhuthaza capability, ingaba kuthathelwe ingqalelo yi-a minority ka-_ngenisa.
A engalunganga isampuli uza mhlawumbi hayi uncedo ekufumaneni i odolo. Isitshayina abanikezeli ingaba famous kuba ethembisa nantoni na banako ukufumana P O, kwaye uzama ukubona yintoni impendula xa sidibanise into omawuyenze ngayo kamva. Ndeva nayo ngokufanayo ngamanye Asian amazwe. Kwabonakala ukuba abe opposite, umzekelo, kuqala inkampani apho mna isebenza, emva kwi-France. Salespeople baba complaining ukuba ixabiso wathumela yabo prospect abathengi baba mgangathweni njengoko i-akhululwe iimveliso. Ukuba inkampani waba ekubeni overly cautious malunga yayo reputation kwi marketplace. Ndiyaqonda Isitshayina abanikezeli ange elungileyo laugh ukuba beva malunga nayo.
Emva China sourcing
Udavide Dayton nje wabhala kakhulu thoughtful ngeposi unelungelo lokuba Phezu-Lesithembiso, Phantsi-Khulula kwaye realities ye-Isitshayina Kwimakethi apho lowo sichaza hypocrisy kwaye imidlalo jikelele ixabiso: ukuba Wonke umntu owakhe isebenza kwi-China kwaye wavusa imibuzo malunga umgangatho ayina ukuthandabuza weva umgca»Akukho namnye unako thelekisa isampuli anamashumi»okanye into efanayo. I-fun inxalenye iqala xa umntu sele ukuba enforce umgangatho imigangatho. Kuba baninzi imveliso iindidi, uluhlu esibhaliweyo izikhankanyi ayikho ngokwaneleyo kuba i-uvimba s ukuqikelela nokuba conformity ingaba kwenzeka okanye hayi. Khumbula, elinolwazi inspectors kwi-QC firms idla kuba kakhulu ibhityile imveliso ulwazi. Ukusebenzisa enye umzekelo njengoko kwi-Dayton ke, inqaku, i-uvimba s capable of nokuba kukho ezintathu umaleko ka-indlela kwaye omnye umaleko ka-lacquer kwi enye ka-wood. Okanye kutheni ngcono ukubonisa kwakhe i-ikuvumile isampuli kwaye ucele ukuba ikhangeleka kwaye uziva ngathi usasebenzisa efanayo. Yesibini khetho kungcono, kuba ngokuqinisekileyo. Kodwa, kuba enkulu nzima izinto, indlela ingaba yesingenisi se thumela isampuli ukuba uvimba s.
Oku kwenziwa rhoqo ingxaki
Iifoto ikholisa akungombono substitute, ngethamsanqa. Abanye enkulu buyers buza factories ukugcina»indlela: isampuli»baya kuba ikuvumile waza wathunyelwa emva phantsi tywina. Kule meko, kukho amaxesha amaninzi akukho uluhlu jonga amanqaku kuba uvimba s. I-indlela: isampuli kwaye packaging amabango kukho kuphela kwimithombo ulwazi malunga imveliso ke conformity. Enye ingxaki kukuba, ukuba uvimba s izaziso a discrepancy kwaye imiqondiso yosasazo ngayo, emashishinini uza phantse ngokuqinisekileyo invoke a isizathu enzima ukuba akukho mntu unako qinisekisa. Ukuba umthengi unelungelo akukho imveliso amava, yena zinokuba nzima ixesha ethabatha izigqibo. Mna waqwalasela okokuba abaninzi ezincinane buyers ingaba kakhulu kwi-focused ixabiso, incopho apho baya ayoyika ka-upsetting i-umthengisi. Siyazi ukuba amaxabiso kwaye delays bakholisa ukwandisa (nkqu emva kohlobo wenziwe ekhutshwe) xa abo koxinzelelo emashishinini ukuphucula umgangatho. Ngamanye amaxesha umthengi inika ndinovelwano ukuba uyazazi yena uphumelele khange get yintoni wathembisa, kuphela kuba ngaphezulu demanding xa ifektri yi weaker indawo. Abanye buyers ingaba ngqo iselwa experienced e ukudlala lo uhlobo imidlalo, kwaye baye bacinge ukuba unako outsmart zabo Isitshayina abanikezeli ixesha elininzi. Ukuba bayagwetywa kwi indawo apho baya urhoxise i odolo ngomzuzu wokugqibela (ngokusebenzisa i-L M kwaye hayi phambi-uthengisa nantoni na kwelabo abathengi), kubaluleke ngokwenene realistic. Kodwa ezi hlela-ixesha uzuza abanike a engalunganga reputation phakathi Isitshayina abanikezeli, ingakumbi ukuba imveliso kwi umbuzo zenzelwe kwindawo enye okanye ezimbini izixeko kuphela. I-obvious isisombululo ngu ukunyanzela ifektri ukwenza ezimbalwa amaqhekeza aye kwindawo yokusebenzela, phantsi efanayo njengoko iimeko isixa imveliso. Kodwa abaninzi factories walile kungenxa yokuba isandisa imathiriyali inkunkuma kwaye decreases usebenze umsebenzi omhle. Kwaye kubalulekile ekuthatheni ukwenzeka kuba iimveliso ezithile. Esinye isisombululo izakuba bahlale phantsi kunye supplier, hamba phezu iinkcukacha isampuli, bhala into owamkelekileyo yintoni na. Ibe KULUNGILE ukuba kokugqiba ayikho olugqibeleleyo ngomhla emva, umzekelo. Kodwa indlela zichaza ezi tolerances ngokucacileyo. Kuyenzeka ukuba bathabathe iifoto yintoni OK yintoni unsellable. Oku kusenokuba ngumsebenzi imiceli-mngeni. Ukuba umthengi ngenene ifuna»real nto», abe nento yokuba ngcono kuba ikhristali gca malunga nayo. I-khetho izakuba:»Siza thumela i-le ngxelo inkampani, kwaye baya walile nantoni na ukuba ayikho ngokugqibeleleyo conform ukuba isampulu.
Ngabo engqongqo kakhulu»
Olu hlobo incoko kufuneka zenzeke phambi kokuba ii-odolo ingaba ekhutshwe kwaye efakwa ebhankini ingaba wired, kwaye ingaba kukho kwakhona kuba abanye imingcipheko. Kuba inkulu ii-odolo, ucacile uluhlu izikhankanyi kwaye isivumelwano kuya kuba luluvo olulungileyo. Ndicebisa ukuba entsha buyers ukuze babe proactively vumelani factories nokwazi okulindeleyo. Umzekelo, sizama ukubeka ngaphandle kakhulu ngokucacileyo phambi sikwazi ukuhlawula efakwa ebhankini ukuze sibe ngenene ingaba izakuba engqongqo KAKHULU kwaye siphinda-ilindele ukuba balandele zethu izivumelwano nemigangatho kanye kanye. Sifanele ukuchitha kakhulu imali kwaye ixesha ukufumana abantu bangena factories PHAMBI sikwazi ukuhlawula nayiphi na monies nje ukuba yenze ezi zinto cacisa ukuba ezininzi amanqanaba ifektri yolawulo. Sifuna factories ukwazi ukuba asingawo oza phantsi-khulula kwi-nakuba kunjalo ngomhla wethu ithembisa ukuba abe ngenene engqongqo xa oko iza QC kwaye ukufumana yonke into njengoko ekuthatheni anamashumi njengoko angakudlakathisi ngokwasemzimbeni kunokwenzeka. Mna nani mna ibe intlungu kwi-i-butt, kodwa ubuncinane ndizakube honest kwaye ikhutshwe kwasekuqaleni malunga nayo. Oku hetalia kwathiwa yi-Renaud Anjoran, i-ASQ Eziqinisekisiweyo Umgangatho Engineer abo wenziwe abakwicandelo Isitshayina nemizi-mveliso ukusukela ngo. Kulula ukunikela kwincwadana yethu apho uza kufumana zonke iiveki uhlaziyo kuba elinolwazi _ngenisa kwaye manufacturers kwi ngcono ukuqonda, uphando, kwaye ekuphuculeni nemizi-mveliso kombane lesixokelelwane kwi-China
China - Ngamazwe Mvume Lokuqhuba